Barkinta ugu fiican ee Gusset Bag Guntinta Baakadka Soo Saaraha Mashiinka Tooska ah iyo Soo-saaraha | GAOGE
Naqshad loogu talagalay Baakadaha Yar-yar
Samee Bac Barkinta, Bacda Gusseted
Mashiinnada baakadaha toosan ee ku habboon samaynta bacaha laga bilaabo cirifka bireed ee fidsan, oo ay weheliso qiyaaso qiyaaso ah, filler auger, qumman iyo madax badan.
Mashiinnada baakadaha toosan ee ku habboon samaynta bacaha laga bilaabo cirifka bireed ee fidsan, oo ay weheliso qiyaasta qiyaasta leh koobabka telescopic ee la hagaajin karo oo leh dabaq. Ku habboon in la soo raro badeecadaha granular (cunto fudud, baastada gaagaaban, digirta, bariiska, miraha la qalajiyey, nacnac, badarka, cuntada xayawaanka, iwm.)
Isku-darka ugufiican ee farsamooyinka iyo nidaamka pneumatic ee habka ugu weyn ee mashiinka ayaa awood u siinaya natiijo fiican oo leh tamar hoose iyo isticmaalka hawada.
Isticmaalka Volumetric ee nidaamka buuxinta mashiinka wuxuu awood u siinayaa culeysyo sax ah.
Kontaroolada fog sida dhererka boorsada iyo hagaajinta, sawir qaadaha fog, kuleylka iyo waqtiga buuxinta, .etc. waxaa loogu talagalay boosaska si fudud loo heli karo guddiga xakamaynta.
Ku shaqeynta mashiinka waxaa lagu fududeeyay nidaamka PLC iyo shaashadaha taabashada.
La jaan qaada nidaamka buuxinta kala duwan.
Mashiinka fudud oo fudud.
Dayactir hoose iyo kharash yar oo hawl socodsiin ah.
Qalabka daabacaadda iyo taariikhda uu dhacayo ee daabacaadda
Tilmaamida heerkulka la dejiyey iyo heerkulka dhabta ah ee dusha sare
Hore: Foomka toosan ee VFFS iyo Mashiinka Baakadaha Khatimidii
Xiga: Mashiinka Xirmada Bag Gusset Automatic
Si buuxda Automatic Doypack Istaag Up boorso Zip Bag ...
Foojarka Automatic Buuxinta Oo Machine Khatimidii Waayo Powde ...